Fepetra amin'ny sakafo masaka :: Tataovan-tsazy hatramin’ny 5 tapitrisa ariary ireo mpivarotra • AoRaha
Fepetra amin’ny sakafo masaka Tataovan-tsazy hatramin’ny 5 tapitrisa ariary ireo mpivarotra
Takiana amin’ny fanarahana an’ireo fepetra ara-pahasalamana ny mpivarora hani-masaka rehetra eto amin’ ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Lamandy manomboka amin’ny 5 000 hatramin’ ny 5 tapitrisa ariary no mitatao amin’ireo tratra tsy manaradalàna, ankoatra ny fanesorana azy amin’ny toerampivarotany.
Nisy ny fivoriana nampa- hafantarana an’ireo tamin’ ny mpivarotra hani-masaka rehetra eto Antananarivo renivohitra, izay ao anatin’ ny tsena sivy amby roapolo tantanan’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, teny amin’ny tranompokonolona Isotry, omaly.
Natoro an’ireo mpivarotra ny fehezan-dalàna monisipaly misahana ny fahadiovana. “Fitsinjovana ny fahasalaman’ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny fampandraisana andraikitra an’ ireo mpivarotra hanaraka ny fenitra momba ny asa fikarakarana ny sakafo no tanjona”, hoy Dr Ramaherito Andrianaly, lehiben’ny fitantanandraharaha misahana ny rano sy ny fanadiovana avy ao amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (BMH).
Fanarenana orinasa Hanamboatra milina mpanova ny tanjaky ny herinaratra ny Jirama
Fanarenana ny renivohitra Nitohy teny Ampasapito ny fanadiovana tobim-piantsonana
Fikorontanan’ny toby fiantsonana Iharan’ny fanakianana ilay toeram-pandoavam-bola tokana
Fampiroboroboana ny fandraharahana :: Hotohanana ireo kaoperativa manerana ny Nosy
Fitaterana mianatsimo :: Taksiborosy an-jatony niainga teny amin’ny Fasan’ny karàna